कुलमान घिसिङको फेरि अर्को कमाल, अबदेखि ३ दिनभित्रै यस्तो सेवा पाइने ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com कुलमान घिसिङको फेरि अर्को कमाल, अबदेखि ३ दिनभित्रै यस्तो सेवा पाइने ! - खबर प्रवाह
नयाँ विद्युत् लाइन जडानमा कुनै सम’स्या छ ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरुले तपाईँको मागअनुसारको सेवा दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेका
छन् वा कुनै पनि सेवाका लागि ढिलाइ गरिरहेका छन् ? यदि छन् भने प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा सिधा सम्पर्क गर्न सकिने भएको छ ।
वितरण केन्द्रका कर्मचारी वा प्राधिकरणका कुनै पनि निकायले ढिलाइ गरे नगरेको जानकारी समेत दिन सकिने भएको छ । बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले माग गरेको बढीमा तीन दिनभित्रै सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध
गराउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ लोड स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो आएपछि त्यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि चासो राख्नुभएको थियो ।
थ्री फेज लाइनको स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने, वितरण केन्द्रका कर्मचारीले अनेकन व्यवधान गर्ने लगायतका गुनासा ग्राहकबाट आएपछि प्राधिकरणले समय नै तोकेर आवश्यक निर्देशन दिएको छ । यसो गर्दासमेत काम हुन नसके ग्राहकले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा
प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । पछिल्लो दिनमा झण्डै २०० मेगावाट र रातको समयमा ६०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गए पनि खपत बढाउन हरसम्भव सबै उपाय अवलम्बन गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुुलमान घिसिङले उद्योग प्रतिष्ठानलाई आवश्यक मात्रामा बिजुली उपलब्ध गराउने बताइसक्नुभएको छ ।
‘प्राधिकरणले एउटा अनुमान पेस गरेको थियो । त्यसलाई थप अध्ययन गरेर हामीले केही कम गरिदिएका छौं । अनुमानभन्दा केही तलमाथि हुन सक्छ,’ विद्युत् नियमन आयोगका सचिव नूतनप्रकाश शर्माले भने ।
आयोगले यस वर्ष भारतबाट विद्युत् आयातका लागि प्रतियुनिट औसत मूल्य ७ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकेको छ । भारतबाट आयात गरिनेमात्र नभई नेपालभित्रै खरिद गरिने विद्युत्को सिलिङ पनि आयोगले घटाइदिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट ३८ अर्ब १ करोड ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ अर्ब ५० करोड ३० लाख १७ हजार युनिट विद्युत् किन्ने अनुमानसहितको प्रस्ताव आयोगमा पेस गरेको थियो ।
तर आयोगले भने ३७ अर्ब २६ करोड ६७ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै विद्युत् किन्न स्वीकृति दिएको छ । यसको अर्थ प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट ६ अर्ब ५० करोड ३० लाख १७ हजार युनिट बराबर मात्रै विद्युत् किन्नका लागि अनुमति पाएको हो ।
गत वर्षको भन्दा यस वर्ष प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट विद्युत् किन्नका लागि १७ अर्ब ३० करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उसले निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब ६ करोड ६३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् किनेको थियो ।
यो ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख १ हजार युनिट बराबर हुन जान्छ । अपर तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै यस वर्ष ८ अर्ब ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको १ अर्ब ८९ करोड ३ लाख ३७ हजार युनिट विद्यत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, हिमाल पावर लिमिटेडबाट प्रवर्द्धित खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट १ अर्ब ४९ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खरिद गर्न आयोगले स्वीकृति दिएको छ ।
हिमाल पावर लिमिटेड र प्राधिकरणबीच उक्त आयोजनाको विद्युत् प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा खरिद–बिक्री गर्ने गरी अन्तरिम सम्झौता भएको थियो ।
तर हिमाल पावरले प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ माग्दै आएको छ । तर आयोगले प्राधिकरणलाई खिम्ती–१ बाट खरिद हुने विद्युत्मा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न भनेको छ ।
ब्याक टु ब्याक जनताका पक्षमा काम गरिरहेका आलेको अर्को ठूलो घोषणा, पश्चिम नेपालका जनताहरु बने उत्साहित !